Ama-siphons amahle kakhulu wokugcina i-aquarium yakho ihlanzekile | Okwezinhlanzi
I-aquarium siphon ingelinye lamathuluzi ayisisekelo okwazi ukwenza umsebenzi wokugcina i-aquarium yethu futhi ngaleyo ndlela siyigcine ihlanzekile nezinhlanzi zethu zijabule futhi ziphilile. Nge-siphoner sizosusa ukungcola okuqoqele phansi futhi sizokusebenzisa ngokunenzuzo ukuvuselela amanzi asemanzini.
Kulesi sihloko sizokhuluma ngani yini i-siphoner, yezinhlobo ezahlukahlukene esingazithola, ukuthi siyiphontsha kanjani i-aquarium futhi sizokufundisa nokuthi ungakha kanjani i-siphon yakho eyenziwe ngokwakho. Ngaphezu kwalokho, sincoma nokuthi ufunde le ndatshana amanzi ongawasebenzisa kuma-aquariums uma kungokokuqala ukuphutha.
1 Yini i-aquarium siphon
2 Kuyini ukusetshenziswa kokuhluza i-aquarium?
3 Izinhlobo ze-siphoner ze-aquarium
3.3 Vele umunce ukungcola
4 Ungayisebenzisa kanjani i-siphon ku-aquarium
5 Ungayifaka kanjani i-aquarium etshaliwe
6 Ungayithenga kuphi i-aquarium siphon
Yini i-aquarium siphon
Abahlanzi be-BPS® Pool ...
I-Siphon Aquarium kaLuigi ...
ISiphon Aquarium, Isihlanzi...
I-aquarium siphoner, eyaziwa nangokuthi i-siphon, iyithuluzi eliwusizo kakhulu elisivumela ukuthi sishiye phansi kwe-aquarium yethu njengezindiza zegolide, ngoba kumunca ukungcola osekunqwabelene ku-gravel ezansi.
Yize kunezinhlobo ezimbalwa ezahlukahlukene zama-siphon (njengoba sizoxoxa engxenyeni elandelayo), ngokubanzi zonke zisebenza ngokufanayo, ngoba bafana nohlobo lomshini wokuhlanza ogwinya amanzi, kanye nodoti onqwabelene, okufanele kushiywe esitsheni esihlukile. Ngokuya ngohlobo, amandla okudonsa enziwa ngogesi noma ngesandla, ngokwesibonelo, ngenxa yedivayisi yokudonsa evumela amanzi angcolile ukuthi angene esitsheni esihlukile futhi ngokusebenzisa i-siphon ngenxa yamandla adonsela phansi.
Kuyini ukusetshenziswa kokuhluza i-aquarium?
Yebo, inhloso yokudonsa i-aquarium akuyona enye ngaphandle kwalokho uyihlanze, susa izinsalela zokudla nezimbungulu zezinhlanzi ezinqwabelana ezansi kwe-aquarium. Kodwa-ke, ukubuya, i-siphon futhi isivumela ukuthi:
Sebenzisa ngokunenzuzo i- shintsha amanzi e-aquarium (bese ufaka okungcolile esikhundleni salo)
Gwema amanzi aluhlaza (ngenxa ye-algae engazalwa ngongcoliseko, isiphoneli esibhekele ukuyisusa)
Vikela izinhlanzi zakho ekuguleni ngenxa yokuba namanzi angcolile kakhulu
Izinhlobo ze-siphoner ze-aquarium
Hay izinhlobo ezimbili eziyinhloko ze-siphoner ze-aquarium, ugesi kanye nezandla.
Ama-siphon amancane zilungele ama-aquariums amancane. Yize kukhona abagesi, njengoba bancane futhi bathambekele ekubeni lula kakhulu futhi bamane babe nohlobo lwensimbi noma ishubhu eliqinile, lapho kungena khona amanzi angcolile, ishubhu elithambile kanye neqhubu langemuva noma inkinobho okufanele siyicindezele ukuze sikwazi ukumunca Amanzi.
I-NICREW 3 ku-1 Yokuhlanza Umshini ...
Ngaphandle kokungabaza okusebenza kahle kakhulu, zisebenza ngokufana nabaphikisi abancane (umlomo oqinile lapho kungena khona amanzi, ishubhu elithambile ahamba ngalo nenkinobho yokumunca, kanye nemoto encane, kunjalo), kodwa ngomehluko wokuthi zinamandla amakhulu. Eminye imise okwesibhamu noma ifaka izikhwama zohlobo lwe-vacuum zokugcina inhlabathi. Into enhle ngala ma-siphon ukuthi, yize ebiza kakhulu kunalawo asetshenziswayo, asivumela ukuthi sifinyelele ezindaweni ezikude kakhulu ze-aquarium ngaphandle komzamo.
Ekugcineni, ngaphakathi kwamasiphon kagesi uzozithola ugesi ngokuphelele (okungukuthi, axhunywe kumanje) noma amabhethri.
Vele umunce ukungcola
i-bdee 6 ku-1 Cleanser ...
Olunye uhlobo lwe-aquarium siphon esingaluthola ezitolo yilolo umunca ukungcola kodwa hhayi amanzi. Idivayisi ifana ncamashi nayo yonke enye, ngomehluko ukuthi inesihlungi lapho ukungcola kudlula khona ukuyigcina esikhwameni noma ethangini, kepha amanzi, asevele ehlanza kancane, abuyiselwa ku-aquarium. Kodwa-ke, lena akuyona imodeli enconyelwe kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, ngoba umusa we-siphon ukuthi usivumela ukuthi sibulale izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa, sihlanze ngezansi kwe-aquarium futhi sishintshe amanzi kalula.
Kunamathuba amaningi wokwenza i-siphon yakho eyenziwe ngokwakho, kepha lapha sizokukhombisa eshibhile futhi elula. Uzodinga kuphela ucezu lweshubhu nebhodlela lepulasitiki!
Okokuqala, thola izinto ezakha i-siphon: isiqeshana sebhubhu esobala, hhayi obukhulu kakhulu noma obuqinile. Ungayithola ezitolo ezikhethekile, njenganoma yisiphi isitolo sehadiwe. Uzodinga futhi i- ibhodlela elincane lamanzi noma isoda (cishe ama-250 ml alungile).
Sika ishubhu ukukala. Akudingeki ukuthi ibe yinde kakhulu noma ibe mfushane kakhulu. Ukulinganisa, sincoma ukubeka ibhakede (okuyilapho amanzi angcolile azogcina khona) endaweni ephansi ye-aquarium. Bese ufaka ithubhu ku-aquarium: isilinganiso esifanele ukuthi ungayibeka phansi phansi kwe-aquarium bese uyisusa ukuze ifinyelele ebhakedeni ngaphandle kwezinkinga.
Sika ibhodlela. Ngokuya ngosayizi we-aquarium, ungayisika iye phezulu noma ngaphansi (ngokwesibonelo, maqondana nendawo uma iyi-aquarium enkulu, noma ngaphansi kwelebula uma iyi-aquarium encane).
Ukubamba ikepisi lebhodlela bese ulihlaba ukuze ukwazi ukufaka ishubhu lepulasitiki kodwa ulibambe. Kuyisinyathelo esinzima kakhulu ukusenza, ngoba ipulasitiki lekepisi liqinile kunezinye futhi kunzima ukulihlaba, ngakho-ke qaphela ukuthi ungazilimazi.
Faka ishubhu emgodini wekepisi bese uyisebenzisela ukufaka umgexo ebhodleleni. Ilungile!
Ukuze kusebenze, beka ingxenye yebhodlela le-siphon ngaphansi kwe-aquarium. Susa wonke amagwebu. Lungisa ibhakede elizohanjiswa ngamanzi angcolile. Okulandelayo, ncela isiphetho samahhala seshubhu kuze kube yilapho amandla adonsela phansi enza ukuthi amanzi awele ebhakedeni (qaphela ukugwinya amanzi angcolile, awanempilo nhlobo, futhi awathandeki neze).
Ekugcineni, sebenzisa noma iyiphi i-siphon oyisebenzisayo, qaphela kakhulu ukuthi ungasusi ngaphezu kwe-30% yamanzi avela ku-aquarium lapho uyihlanza, njengoba izinhlanzi zakho zingagula.
Ungayisebenzisa kanjani i-siphon ku-aquarium
Ukusetshenziswa kwesiphon, empeleni, kulula, kodwa kufanele siqaphele ukuthi singalayishi indawo yokuhlala izinhlanzi zethu.
Okokuqala, lungiselela amathuluzi owadingayo: i-siphoner futhi, uma kwenzeka kuyisibonelo esiyidingayo, a ibhakede noma isitsha. Lokhu kufanele kubekwe endaweni ephakeme kuno-aquarium ukuze amandla adonsela phansi enze umsebenzi wawo.
Qala ukukhipha ngezansi ngokucophelela. Kungcono ukuqala lapho ukungcola okuningi kunqwabelene khona. Futhi, kufanele uzame ukungawususi umhlabathi phansi noma umbe okuthile, kungenjalo indawo yenhlanzi yakho ingathinteka.
Kubalulekile futhi ukuthi, njengoba sishilo, ungathathi amanzi amaningi kunesikweletu. Ubuningi obungu-30%, ngoba iphesenti eliphakeme lingathinta izinhlanzi zakho. Uma usuqedile ukukhipha, kuzofanele ufake amanye amanzi angcolile ufake ahlanzekile, kepha khumbula ukuthi lokhu kufanele kuphathwe ngokufana nalokho okushiywe ku-aquarium futhi kube nokushisa okufanayo.
Ekugcineni, yize kuzoncika kakhulu kusayizi we-aquarium yakho, inqubo yokuphontshwa kufanele yenziwe ngezikhathi ezithile. Okungenani kanye ngenyanga, kuze kube kanye ngesonto uma kudingeka.
Ungayifaka kanjani i-aquarium etshaliwe
Ama-aquariums atshaliwe afanele isigaba esihlukile ekusetshenzisweni kwe-aquarium siphon, ngoba zibucayi ngendlela emangalisayo. Ukuze ungathathi indawo yezinhlanzi zakho ngaphambi kwakho, sincoma okulandelayo:
Khetha i- i-siphoner kagesi, kodwa ngamandla amancane, nokungena okuncane. Uma kungenjalo, ungahlanza kanzima futhi umbe izitshalo, esifuna ukukugwema ngazo zonke izindlela.
Lapho uqala ukuncela, qaphela kakhulu musa ukumba izimpande noma ulimaze izitshalo. Uma une-siphon enokungena okuncane, njengoba sishilo, uzokwazi ukulawula lesi sinyathelo kangcono kakhulu.
Gxila ikakhulukazi ezindaweni lapho imfucumfucu ihlangana khona kanye nenhlanzi.
Ekugcineni, izitshalo ezintekenteke kunazo zonke ekuziphoneni yilezo ezihamba emhlabathini. Kwenze kakhulu, ngobumnene ukuze ungazimbi.
Ungayithenga kuphi i-aquarium siphon
Hay izindawo eziningi ungathenga i-siphonerYebo, bavame ukukhethekile (ungalindeli ukubathola esitolo sokudla edolobheni lakho). Okuvame kakhulu yilezi:
Amazon, inkosi yezitolo, inazo zonke amamodeli abelokhu ekhona futhi abekhona. Noma ngabe zilula, zenziwa ngezandla, zisebenza ngogesi, ziqhutshwa ngamabhethri, zinamandla amakhulu noma angaphansi… Kunconywa kakhulu ukuthi, ngaphezu kwencazelo yomkhiqizo, bheka imibono ukuze ubone ukuthi ingaguqulwa kanjani nezidingo zakho ngokuya ngokuthi isipiliyoni sabanye.
En izitolo ezikhethekile zezilwane ezifuywayoNjengoKiwoko, uzothola amamodeli ambalwa. Yize kungenzeka angabi nokuhlukahluka okuningi njenge-Amazon futhi abize kakhulu kwezinye izimo, okuhle ngalezi zitolo ukuthi ungaya mathupha bese ucela iseluleko kongoti, okuthile okunconywe ikakhulukazi lapho usanda kuqala umhlaba othakazelisayo wezinhlanzi.
I-aquarium siphon iyithuluzi eliyisisekelo lokuhlanza i-aquarium nokwenza izinhlanzi zakho, zibuyise, zibe nempilo futhi zijabule. Sithemba ukuthi sikusizile ukuthi uqonde ukuthi isebenza kanjani futhi senze izinto zaba lula kuwe ukuthi ukhethe isiphon esivumelana kahle nawe ne-aquarium yakho. Sitshele, wake walisebenzisa leli thuluzi? Kuhambe kanjani? Ngabe uyayincoma imodeli ethile?
Indlela ephelele ye-athikili: Okwezinhlanzi » Izesekeli » Siphoner se-aquarium